Qaramada Midoobey oo ka hadashey isjiidjiidka Kismaayo, dhinacyada siyaasada isku haayana ugu baaqdey wada hadal – idalenews.com
Qaramada Midoobey oo ka hadashey isjiidjiidka Kismaayo, dhinacyada siyaasada isku haayana ugu baaqdey wada hadal
Ku Xigeenka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey, oo ka qeyb galay shirkii Somalia ee lagu dhawaan lagu soo gabagabeeyey dalka Japan, ayaa si kooban u soo hadal qaaday muranka la xiriira maamulka Jubbaland ee ka taagan magaalada Kismaayo.
Xoghaye ku xigeenka oo ku hadlaayey magaca Ban Ki Moon, ayaa sheegay in loo baahan yahay in sare loo qaado hab fikirka Soomaalida, islamarkaana la baro maamul wanaagga, si looga hortaggo dhibaato ka dhacda dalka.
Mr. Ban ayaa sheegay in xiisadda siyaasadeed ee kal aloolsan Kismaayo ay tahay arrin aan u wanaagsaneyn Soomaalida, loona baaahan yahay in la xalliyo.
“Xiisadda sare usii kaceysa ee Kismaayo, waxa ay astaan cad u tahay oo ay na tuseysaa hal arriin oo muhim ah, taasi oo ah in loo baahan yahay in la de dejiyo oo sare loo qaado wada-hadal Soomaalida dhex mara, si ay u bartaan sida la isula noolaado oo loogu dhaqmo sharciga” ayuu yiri xoghayaha guud ee QM.
“Waaa muhim ah is-beddel lagu sameeyo habka cadaaladda dalka, sarena loo qaado is-dhexgalka Soomaalida, ayada oo muhiimadda la siinayo waddanka” ayuu yiri.
Soomaalida degan wadanka South Africa oo xaalada amaan daro oo adag la soo gudboonaatey+ Daawo
Ambassador Mahiga oo dib ugu noqonaayo New York, Wareysi lala yeeshayna ku sheegey arrimo dhowr ah….